Wiper izindwani (Wiper blade) zenzelwe ukuqinisekisa nokuhlanzeka kahle windscreen futhi iwindi elingemuva izibuko imoto. Isesimweni esihle, ne Washer bakusekele, kalula babhekane ngodaka, iqhwa namanzi. Kodwa uma wiper azisebenzi, ukunyakaza is hhayi Kunconywa ukuba uqhubeke ezimweni ezimbi sezulu. Lusebenza ukuphepha kwakho. Kungcono siyeke bese uzama ukulungisa kubo.
. Kulesi sihloko sizoxoxa kungani ama-wiper azisebenzi phezu Vaz-2109. Sibheka sezizathu esiyinhloko ukwehluleka, nendlela ukuyixazulula.
Umklamo "Nine" Wiper
, или работают не так, как должны, прежде чем приступить к их ремонту, нелишним будет узнать об устройстве стеклоочистителя в целом. Uma yakho Vaz-2109, ama-wiper azisebenzi noma azisebenzi njengoba kufanele, ngaphambi kokuba uqale ukulungisa kubo, kuyasiza ukufunda mayelana idivayisi windscreen Wiper iyonke. Ngakho-ke kuyoba lula ukucacisa imbangela iphutha futhi ukukulungisa kamuva.
I Wiper yidivayisi ehlanganisa drive (motor ne kushaft elongate), kanye uhlelo igiya isigwedlo, obizwa ngokuthi i-trapezoid. Kuyinto lokhu futhi oyenza isebenze, ama-wiper ngokwabo.
Ekupheleni phambi Rotor we motor kuyinto cut isibungu, okuyinto obandakanya futhi ushayela emaphakathi igiya reducer. Uma uvula motor Wiper kuyinto akukhuthalele imishini wesifunda ibhodi. Ngaphezu kwalokho, nesicu salo iqala ukujikisa, ukushayela gearbox. Yena, ushukumisela iziyisikhombisa, emaphethelweni awo alethwe ebusweni zakapotnoy umzimba panel kanye exhunywe kwi-abahlanzi izindlu. Omunye ekupheleni kushaft igiya ifakwe cam ekhethekile ilawula wiper ezihambayo contact siyeke ngalesiya isikhundla ekupheleni.
Wiper kulawulwa inkinobho ekhethekile ogibele ikholomu imoto ayo. Lapho uyisebenzisa hhayi kuphela kuhlanganisa ama-wiper-off, kodwa futhi ungasebenza izindlela ezahlukene. Lokhu kukuvumela ukuba ulungise ijubane izindwani Wiper, kuye ngokuthi izimo sezulu. Izimoto Vaz-2109 izindlela ezintathu anikezwa:
njalo isivinini ongaphakeme ezihambayo, ama-wiper,
njalo ngesivinini ukuhamba abahlanzi.
лишь в одном из режимов, поэтому важно знать не только конструктивные особенности стеклоочистителя, но и механизм управления его работой. Ngokuvamile kwenzeka ukuthi indlela, ukuthi Vaz-2109, ama-wiper azisebenzi nje kwelinye izindlela, ngakho-ke kubalulekile ukwazi hhayi kuphela netimphawu teluhlakasimo lweSitatimende Wiper somoya, kodwa futhi ukulawula indlela umsebenzi walo.
ukusebenza Kweseva we abahlanzi kufakwe lokuqala (zokusebenza) isikhundla kanti eyesibili inkinobho isigwedlo. Umsebenzi wakhe enikeziwe uhlobo edluliselwe 526,3747. Itholakala block inhlangano semoto kuboniswa ku circuit electronic ngokuthi "k3". Lokhu edluliselwe sihlanganisa ama-wiper uqalisa windscreen futhi iwindi labaqaphi elingemuva.
Ngekhulu lesithathu isikhundla wezindlu usebenza kwimodi okuqhubekayo nge speed ongaphakeme ukunyakaza ngokukhululekile. Ukushintshela ukusebenza baqhubeka ngesivinini Wiper enikeziwe isigwedlo wesine isikhundla.
Ukubhekana sokuphuka Wiper, ake sibheke ukuthi izici kungase kudingeke.
izimpawu ukwehluleka phakathi okulandelayo:
Uma idivayisi ngokuvamile akasabeli (edluliselwe akusho uchofoze, motor akasebenzisi);
inkinobho icushiwe, kodwa injini ingavuli;
futhi udlulisela, bese usebenza motor kagesi, shayela kodwa hhayi ezihambayo noma ezihambayo ayo ngokuthatha indlela okungeyona;
; ayisebenzi wiper ngakanye Vaz-2109;
motor ngezikhathi iyama;
Manje ahlaziye ngamunye izici ngokuhlukile Sectional amaphutha kungenzeka futhi izixazululo zabo.
Wiper ngamawala ku izindlela noma ukushintsha
, а при переключении рычага не слышно ни щелчков реле, ни звука работающего электродвигателя, причина может крыться либо в переключателе, либо в реле, либо в предохранителях. Uma uzama uvule Wiper, kodwa yakho Vaz-2109, ama-wiper azisebenzi, futhi isigwedlo usuke awukwazi ukuzwa noma iyiphi ukuchofoza edluliselwe noma ukugijima umsindo motor, imbangela angase alale kungaba inkinobho noma edluliselwe, noma fuses.
Kulokhu, kufanele uqale uqinisekise ubuqotho fuse Wiper. Itholakala block inhlangano eyathi F5. Hlola kungaba nge multimeter, kufakwe imodi umhloli. Badlule fuse bimetallic ukufakwa vacuum gearbox. в зимнее время, причина может быть именно в нем. Uma ama-wiper liyeke ukusebenza phezu Vaz-2109 ebusika kungenzeka isizathu ilapho. Lokhu fuse zaphela ukuguqulwa zokugcina "nines." indima yakhe - ukuvikela vacuum injini ngu okweqile lapho emabhulashini ukufriza kuya ingilazi. Lihlole kungaba multimeter sasinokuhlangenwe ikumodi umhloli.
Okulandelayo, iya edluliselwe. Njengoba sekushiwo, kuba block inhlangano okubhekiselwe kubo ngelithi "k3". Thola inkinobho, thina kokuyikhipha esihlalweni, futhi endaweni yayo ukubeka chopper ezinhle zishunyayelwe. Hlola Wiper. Uma wathola, ukuthenga edluliselwe entsha. Uma kwesokunxele azizange zishintshe, uqhubeke inkinga.
Ngokuqondene inkinobho, bese uhlola ukuthi ukusebenza kwaso nzima kakhulu bebodwa. Anakho isakhiwo kunalokho eziyinkimbinkimbi, ngakho-ke futhi kulula esikhundleni incwadi eyaziwa, kunokuba azame ukulungisa. , можете быть уверены, что проблема именно в подрулевом переключателе. By endleleni, uma ungenawo usebenze wiper bese uvula amasignali Vaz-2109, ungaqiniseka ukuthi inkinga e inkinobho eziqondisa ikholomu.
I edluliselwe icushiwe, kodwa injini kungaqali
Ukuthola nezimpawu ezifanayo, ke kungenziwa bazitshela ukuthi aphume oda kunanoma ngubani kulaba abangenhla okukhulunywa fuses noma motor kagesi ngokwayo. Hlola fuses multimeter. Uma kulungile, kuvulwa hood kanye nokuhlola i-trapezoid ukuhlanekezela noma khona into isakhiwo angaphandle. Ebusika, okokuqandisa okungenzeka izindwani Wiper kuya windscreen. в морозную погоду, первым делом проверьте их состояние. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa kuhambisana nezimpawu ezifanayo, ngakho uma Vaz-2109, ama-wiper azisebenzi kubanda, qinisekisa ukubheka isimo sabo.
Uma trapezoid isesimweni ukusebenza, futhi ukudla Wiper kukhona ephathekayo, ukususa imoto ukuze kuhlonzwe. Ukuqeda nezinye amaphutha, ngemva Ukudilizwa motor, ixhume ngqo terminals ibhethri. Okusetshenzelwe - funa imbangela yesifunda kagesi, akukho - contact imoto ngogesi.
Sidlulisele bese ushayela imoto ukugijima, kodwa ama-wiper kungukuthi ezihambayo noma ezihambayo ayo ngokuthatha indlela okungeyona
Ngokuvamile kwenzeka kanjalo, ukuthi lapho abahlanzi zonke izakhi ze-Wiper ukusebenza ngokujwayelekile, kodwa ama-wiper kukhona engasuki noma udlulele endleleni engafanele. Lena sokuthi Slots phezu iziyisikhombisa we trapezoid bawela labhidlika. Lokhu inkinga isixazululekile ngokufaka esikhundleni iziyisikhombisa. In an icala ngokwedlulele, ungazama qinisa nati izakhiwo abahlanzi, ngokucindezela kubo nzima enika, kodwa ngokuhamba kwesikhathi leyo nkinga zizokumemezela uqobo futhi.
Akusiso imodi ngakanye
, соответствующее прерывистому режиму, попробуйте перейти в постоянный медленный или быстрый режим. Faka Wiper futhi ukuthola kungaphumeleli ngowokuqala isikhundla wiper Vaz-2109, elihambisana imodi ngakanye, zama ukuya imodi ingasheshi noma okusheshayo njalo. Uma omunye izinhlinzeko zoMthetho wamaZinga wiper somoya abasebenza kahle, ukuya ngqo edluliselwe. Esikhundleni salo esihle aziwayo.
Motor ngezikhathi iyama
Imodi Kweseva ihlukile kwabanye kuleyo ekupheleni umjikelezo ngamunye, ama-wiper wenze bayeka isikhundla sokuqala. Lokhu ibangelwa ukuhamba cam eliseKissy ezingemuva idrayivu shaft. Yena livaleke the contact ezihambayo umkhawulo inkinobho Wiper. Eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa wiper ngezikhathi ngokujwayelekile ohambisana nesifanekiso ukuhluleka kwawo: ukugqoka, umonakalo. Kungase kube inkinga plate full noma oxhumana nabo zakhe.
I cam kungenziwa kalula esikhundleni yikhasimende. Ngokuqondene ipuleti noxhumana nabo, kufanele babe abangane lula ukuze ujike e lapho kudingeka.
Kancane usebenze wiper ngesikhathi Vaz-2109
Izizathu ukunciphisa ijubane emabhulashini yilezi:
ongaphakeme lokushisa emoyeni;
Gqoka (slizyvanie) splines kwakwakhe iziyisikhombisa neziqhumane wiper;
Esimweni sokuqala, lo-wiper ungashukumisela kancane kunokujwayelekile ngenxa solidification we igrisi phezu reducer igiya. Ngokuvamile, lapho iyazifudumeza imoto, le nkinga iphele.
Lapho ezigugile splines emabhulashini Ungahambisa futhi kancane ngenxa ukujikeleza amathiphu le iziyisikhombisa besezihlalweni zabo. Thina ukuxazulula le nkinga ngokwenza esikhundleni izakhi bakhathale.
Uma lezi zinyathelo ungazange ayithelanga imiphumela oyifunayo, sisusa motor futhi ulithumele iyokhandwa.
Wiper engemuva akusebenzi Vaz-2109
Ngezinye Vaz-2109 unesinye ukuzihlanza. Itholakala kwi ingilazi umnyango emuva futhi has a drive azimele wodwa. Janitor eliqhutshwa ehlukile motor kagesi nge igiya encane. Ungakwazi ukufinyelela kuwo kusukela ngaphakathi umnyango, wakhumula isikhumba sakhe.
Fault Wiper ezingemuva ingase futhi ehambisana ne-kokubili: kusombulula tinkinga inkinobho kanye nezinkinga motor kagesi. awusebenzi usebenze avame:
ngenxa ukuphazamiseka contact evamile e-isixhumi;
baphule ugesi izintambo;
zokugwema ukuphuka of motor noma gearbox.
Yohlobo lweVolkswagen Golf-6 - ezibekiweko lobuchwepheshe, izibuyekezo abanikazi
Amafutha Bardahl. Uphenyo uwoyela engine Bardahl
Dzheyms Uitmor: Biography emfushane, ethandwa e ifilimu futhi kumabonakude
"Credit Centre", Kazan (Tatarstan)